लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको एफिक एस्टोनियन कन्नडा किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोरियन क्रोएसियन क्षोसा गुजराती ग्रीक चिचेवा चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टिग्रिन्या डच डेनिश तामिल ताहिटी त्वी त्सोंगा थाई नर्वेली नेपाली पंजाबी पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बुल्गेरियन भियतनामिज मल्यालम मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) सामोअन सिंहला सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
‘बुद्धि चर्को स्वरले कराउँछ, र समझशक्ति उच्च सोरले पुकार्छ। त्यो दोबाटोहरूमा उभिरहन्छ, बाटोको किनारामा, डाँडाको टाकुरामा त्यो खडा हुन्छ। मूल-ढोकाको छेउमा त्यो चर्को स्वरले कराउँछ।’—हितोपदेश ८:१-३.
बुद्धि अमूल्य छ। बुद्धि नभएको मान्छेले एक पछि अर्को मूर्ख काम गर्छ। त्यसोभए साँचो बुद्धि कहाँ पाउन सकिन्छ? हितोपदेश किताबका लेखकले सृष्टिकर्ताको अतुलनीय बुद्धिबारे बताउन खोज्दै थिए। सबै मानिसले एउटा विशेष किताब अध्ययन गरेर सृष्टिकर्ताको बुद्धिबारे सिक्न सक्छन्‌। त्यो किताब हो, बाइबल। तल दिइएका केही कुराहरू विचार गरौं:
द वर्ल्ड बूक इन्साइक्लोपीडिया यसो भन्छ: “संसारको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै वितरण गरिएको किताब बाइबल हो। बाइबलजस्तो पटक-पटक अनि थुप्रै भाषामा अनुवाद गरिएको किताब अरू कुनै छैन।” बाइबल पूरा वा आंशिक गरी झन्डै २,६०० भाषामा उपलब्ध छ। त्यसैले विश्वको ९० प्रतिशत भन्दा धेरै मानिसले यो किताब आफ्नै भाषामा पढ्‌न पाएका छन्‌ ।
अर्को अर्थमा पनि बुद्धि ‘चर्को स्वरले कराउँदै छ।’ मत्ती २४:१४ मा यसो लेखिएको छ: “सबै जातिलाई साक्षी दिनका लागि राज्यको यो सुसमाचार सारा पृथ्वीभरि प्रचार गरिनेछ। त्यसपछि यस युगको अन्त हुनेछ।”
“सुसमाचार” नै साँचो बुद्धि हो। किनभने यसले मानिसजातिका समस्याहरूको समाधान गर्ने परमेश्वरको बुद्धिमान्‌ उपाय अर्थात्‌ उहाँको राज्यबारे बताउँछ। परमेश्वरको राज्य एउटा सरकार हो, जसले पूरै पृथ्वीमाथि शासन गर्नेछ। (दानियल २:४४; ७:१३, १४) त्यसैले येशूले यसरी प्रार्थना गर्नुभयो: “तपाईंको राज्य आओस्। तपाईंको इच्छा जसरी स्वर्गमा पूरा भइरहेको छ, त्यसरी नै पृथ्वीमा पनि पूरा होस्।”—मत्ती ६:९, १०.
यहोवाका साक्षीहरू २३९ देश तथा टापुमा परमेश्वरको राज्यबारे सुनाउँदै छन्‌ र यो कामलाई तिनीहरू सम्मान ठान्छन्‌! हो, परमेश्वरको बुद्धि वास्तवमै सहर, गाउँ अनि मानिसहरूको घर-घरको ‘प्रवेशद्वारमा चर्को स्वरले कराउँदै छ।’ के तपाईं त्यो सुन्दै हुनुहुन्छ? (g14-E 05)
शेयर गर्ने शेयर गर्ने बुद्धि चर्को स्वरले कराउँदै छ​—⁠के तपाईं त्यो सुन्दै हुनुहुन्छ?
परिवारका लागि खर्च कसरी कम गर्ने
Text प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प ब्यूँझनुहोस्! हार नमान्नुहोस्!—जिउने कारण छ
शेयर गर्ने शेयर गर्ने ब्यूँझनुहोस्! हार नमान्नुहोस्!—जिउने कारण छ
हार नमान्नुहोस्!—जिउने कारण छ
ब्यूँझनुहोस्! हार नमान्नुहोस्!—जिउने कारण छ